Ny fitaovam-piadiana miafina ho an'ny marketing sy fivarotana tsara kokoa. Martech Zone
Talata, Novambra 5, 2013 Kelsey Cox
Raha tsiahivina ny andro, ny fahazoana izay ilain'ny mpanjifa dia lalao maminavina matetika, fa amin'ny fitaovana ankehitriny toa azy ireo Analytics ary automation marketing, ny maminavina ny fihetsiky ny mpanjifa dia tsotra kokoa.
95% amin'ireo orinasa mampiasa vinavina Analytics nitatitra fitarihana tsara kokoa, fahombiazana lehibe kokoa, ary / na varotra mihidy bebe kokoa. Ankoatr'izay, ny 59% an'ny CMO dia mahatsapa fa ny fampiharana vahaolana ara-barotra mandeha ho azy dia hampitombo ny fahombiazan'ny tetika marketing sy ny fahombiazany. Fanampiana automatique amin'ny fikolokoloana ny vina aman-tariby hitarika anao, noho izany tsy mandany vola amin'ny mpanjifa izay tsy vonona hividy ianao, fa mikendry izay.
Ny orinasa savvy dia mamela ny varotra mandeha ho azy hijerena ny fihetsiky ny mpanjifa mba hahafahan'ny mpivarotra mifantoka amin'ny fotoanany amin'ny asa lehibe kokoa. Ity infographic ity, nataon'i Milina Lattice, sary an-tsaina ny angona manodidina Analytics ary automatisation, ary ny fomba fampiasana ireo fitaovam-piadiana miafina ireo hananganana drafitra marketing tsara kokoa.
Tags: AnalyticsSary torohay-barotraautomation marketingvinavina Analytics